Statex.info — ငွေလဲနှုန်း, ဘဏ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်, မြန်မာ
ငွေလဲနှုန်း အပေါ်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက် 25 အောက်တိုဘာလ, 2020
ကျော် 404 ဘဏ်တွေအတွက် မြန်မာ
Statex - နယ်မြေထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဘဏ်များအပေါငျးတို့ရုံးခန်းများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်ထူးခြားတဲ့လမ်းညွှန် မြန်မာ. ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အသေးစိတျဘဏ်အကိုင်းအခက်၏တည်နေရာပေါ်သတင်းအချက်အလက်, စစ်ဆင်ရေး၏သူတို့ရဲ့ mode ကိုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြုစုကြပြီ.
ငါတို့သည်သင်တို့တယောက်ကိုတယောက်ငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုတဲ့အဆင်ပြေငွေကြေးဂဏန်းတွက်စက်၏အားသာချက်ယူရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။ သငျသညျကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျ 150 ကျော်ငွေကြေးယူနစ်ကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငွေလဲနှုန်းသင်သည်ယခုအချိန်တွင်အမှန်တကယ်ငွေလဲနှုန်းအရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသောငါးမိနစ်ကြားကာလမှာ update လုပ်ကြသည်။ ဒါဟာဘဏ်ငွေလဲနှုန်းဖလှယ်ကှာခွားဖွယ်ရှိကြောင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ရဲ့မြို့၏ဘဏ်များအတွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုသတ်မှတ်။
ဘဏ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ထိပ်ပိုင်းက menu ကနေသင့်ရဲ့မြို့ကို select လုပ်ပါ, သင့်တည်နေရာကိုသတ်မှတ်။ ထိုမြို့သည်စာရင်းထဲတွင်မတွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုပါကအလိုအလျှောက်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
MMK → USD	MMK → EUR	MMK → GBP	MMK → JPY	MMK → CHF	MMK → AUD	MMK → CAD	MMK → DKK	MMK → NOK	MMK → NZD	MMK → SGD	MMK → ILS	MMK → PLN	MMK → BRL	MMK → KRW	MMK → MXN	MMK → SAR	MMK → TRY	MMK → SEK	MMK → ZAR	MMK → AED	MMK → THB	MMK → CNY	MMK → KZT
ထိုစာရင်းထဲတွင်အလိုရှိသောမြို့မတှေ့နိုငျပါသလော ဒီနေရာမှာကိုယ်စားပြုမြို့ကြီးများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ — လင့်ခ်.
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0363 s.